Guddiga Doorashada Koonfur Galbeed Oo Sheegay In Doorashadu Ay Waqtigeeda Ku Dhici Doonto – Kalfadhi
Baarlamaanka maamulka Koofur Galbeed ayaa 21-kii bishan nmagacaabay guddiga doorashada madaxweymaha maamulka Koofur Galbeed, taas oo qorshu yahay in 17-ka bisha soo socota ay ka dhacdo magaalada Baydhabo.
Guddigan ayaa ka kooban 27 xubnood oo ka shan kamid ah yihiin dumar, waxaana dhammaantood ay ka tirsan yihiin xildhibaannada Baarlamaanka Maamulka Koofur Galbeed.
Shiikh Maxamed Nuur kamid ah xubanaha Guddiga ayaa Kalfadhi uga warramay shaqooyinka ay qaban doonaan. Sida ay ula dagaalayaan musuqa iyo qaabka doorashada.
Waxa uu sheegay in maalinta barri ah ay dooran doonaan guddoomiyaha guddigooda, ku xigeenkiisa iyo xoghaya, kaddibna ay qaban doonaan araajida musharraxiinta u tartamaya madaxtinimada K/Galbeed.
Waxa uu ku sheegay wareysigiisa Kalfadhi in ay xoogga saari doonaan sidii ay ula dagaalmi lahaayeen musuq maasuqa inta doorashada madaxtinimadu socoto.
Waxa uu sheegay in musharraxii lagu helo musuq ay sameyn ku yeelan doonto doorashadiisa.